Sajhasabal.com |'सक्नुहुन्छ भने सुध्रिएर पशुपति शर्मालाई गलत सावित गर्नुस्'
आभास पौडेल | "साच्चै हामीलाई देशको मायाँ छ भने हामी सबैभन्दा पहिला एक सच्चा नेपाली वन्न सिकौं अनि मात्र बल्ल कुनै राजनितिक दलको कार्यकर्ता बनौं । कुनै पनि कुरा नेपाली भएर र दु:ख पाएको जनताको नजरले हेरौं अनि मात्र यहाँको बेथिति र वास्तविक चित्र देख्न सकिन्छ ।
अहिलेको सन्दर्भमा शुशासन, विकास, शान्ति र समृद्धिलाई मुल नारा वनाएर गठन भएको सरकार एउटा लोकप्रिय गायकले विकृतिको भण्डाफोर गर्दै सरकारको उदेश्यलाई सहयोग पुग्नेगरी गित सार्वजनिक गर्दा तर्सिनुपर्ने कुनै कारण छैन । त्यसैले हटाउनेनै हो भने नेपालमा चरम चुलीमा पुगेको भ्रष्टाचार हटाउन सक्नुपर्छ । बलात्कार गर्दा शोषण गर्दा, घुस खाँदा, हत्या हुँदा, अपहरण गर्दा त्यस माथी एक्सन लिनुको सट्टा हाम्रो देश र जनताको यथार्थ चित्र उतार्ने गितलाई प्रतिवन्ध लगाउनुको कारण के हो ? एउटा गीतले बालुवाटारनै तर्सनुपर्ने किन ?
पार्टीको झण्डा देखायो कार्यकर्तालाई कुकुर भन्यो यमराजको शासन भन्यो भनेर उफ्रनेहरु पार्टीभक्त कार्यकर्ता मात्र हुन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ । देश बन्न नसक्नुको कारण पनि यहि हो भन्दा फरक नपर्ला । महान बरिष्ठज्युहरुलाई पशुपति शर्माको गीतले यथार्थ कुराको चित्रण गर्दा यतिसम्म टाउको दुख्यो भने एउटा दिन दुखि नागरिकलाई कस्तो अनुभव भयो होला । निर्मला बलात्कार पछीको हत्या काण्ड, वाइड बडि घोटाला काण्ड, सुन तस्करी काण्ड लागायत अनेकौं काण्डमा मौन बसिदिदा एउटा कलाकारले गीत गाए त्यसैको समर्थनमा गीत भाइरल भईरहेको छ ।
यहाँ त बहुमतको सरकार छ, जे छ आफ्नो अनुकुल हुन पर्छ भन्ने भईसकेको छ । उदाहरण -चारैतिरबाट दबाव आएपछी अनन्त: पशुपति शर्माले गित हटाए, यो बाट के प्रष्ट हुन्छ भने नेपालमा नेपालीले स्वतन्त्र तरिकाले आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार छैन ।
पशुपतिको गीत गलत रहेको, शब्द चयनमा ध्यान दिनपर्ने भन्दै गर्दा देशको यथार्थ जे छ, त्यसैलाई प्रस्तुत गरेको पाउँदा निकै मनासिव लाग्यो । उनको गितको भाव बुझेर जुनसुकै नेपाली मनले पशुपति शर्मालाई धन्यवाद दिनुपर्छ ।
गितको अर्थ बुझेर पशुपतिलाई दबाब दिएका कार्यकर्ताहरुले अब आफ्नो गलत बाटोमा रहेका नेताहरुलाई सहि बाटोमा ल्याउने कि नल्याउने ? सक्नुहुन्छ भने कार्यकर्ता तथा नेताज्यूहरु सुध्रिएर पशुपति शर्मालाई गलत सावित गर्नुस् अन्यथा गीतको भावले टपक्कै तपाइँ नेता र कार्यकर्तालाई टिपेर पस्किएको छ । देशमा लोकतन्त्रको स्थानमा लुटतन्त्र हावी भएको सन्दर्भमा यो गीतलाई जनवादी गीत भन्न सकिन्छ । यो गीतले प्रस्तुत गरेको भाव सिधा र स्पष्ट छ, जो नेपालको वर्तमान परिस्थितिसँग मेल खान्छ । यसैबाट पाठ सिकेर सुध्रिनुपर्छ ।